Galaxy Note 7 ga-ere ọzọ na United States na Septemba 21 | Akụkọ akụrụngwa
A ga-ere ahịa Galaxy Note 7 na United States na Septemba 21
Nsogbu siri ike nke 7 Galaxy Note nke mere ka ọ fụọ n'ihi ụda batrị, o yiri ka a ga-edozi ha ma n'oge awa ikpeazụ Samsung kwupụtara na ọnụ ga-ere ọzọ na United States na Septemba 21. N’ụbọchị ahụ, a ga-amalite inyefe 7 Note ọhụrụ maka ndị ọrụ zụtara flagship ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea, na-edozi nsogbu ndị ahụ kpamkpam.
N'oge a enweghị ụbọchị maka nloghachi nke Galaxy Note 7 na ụlọ ahịa ndị Spain na n'ọtụtụ mba ndị ọzọ, mana a na-atụ anya na Samsung ga-ekwupụta ya na eze na ụbọchị ole na ole.
Na United States, ndị ọrụ nwere iji nyefee ngwaọrụ ọhụrụ ha iji nweta nke ọhụrụ, na nsogbu batrị ahụ edozila, ga-enweta Galaxy Note 7 ọhụrụ ha karịa ka a tụrụ anya ya. Na mba ndị ọzọ anyị ga-echere iji hụ etu usoro a si aga, ma o yiri ka n’ikpeazụ ọnwa nke Samsung chọrọ dị ka ozi ekwesịghị gafere.
Nsogbu nke Galaxy Note 7 yiri ka ọ na-abịa na njedebe, ọ bụ ezie na Samsung nwere ụzọ siri ike n'ihu ya, yana ngwaọrụ mkpanaka nke bidoro njem ya n'ahịa dị oke njọ ma na ugbu a, ugbua efuola ọtụtụ narị nde mmadụ euro. Na mgbakwunye, ugbu a ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na ama ọhụụ a ga-ejigide ọnụọgụ ahịa ya ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ agaghị atụkwasị obi na nsogbu niile na-edozi.
You ga - azụta 7 Galaxy Note n'agbanyeghị nsogbu niile o nwere na mmalite ụbọchị ya na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » A ga-ere ahịa Galaxy Note 7 na United States na Septemba 21
Samsung Gear 360 Pro nwere ike soro Samsung Galaxy S8 ohuru
Ndị ọrụ Pokémon Go na-arụ ọrụ wedara site na 80%